Nin gacantiisa kor u hayay in kabadan 45 sano! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Nin gacantiisa kor u hayay in kabadan 45 sano!
Nin gacantiisa kor u hayay in kabadan 45 sano!
Ninkan ayaa gacantiisa kor u hayay in kabadan 45 sano
India (Halqaran.com) – Ninkan ayaa gacantiisa kor u hayay in kabadan 45 sano, waa wax adag in la rumeysto, waxaan ku nool nahay duni aan seexano kuna soo toosno sheekooyin yaab leh. Sadhu Amar Bharati oo ah nin u dhashay waddanka Hindiya ayaa sheeganaya in uu gacantiisa midig kor u hayay muddo 45 sano ah isagoo u sababeeyay in uu iska jaro nolosha raaxada ah.
Gacantiisa kor u kacsan ayaa aad uga liidato tan kale, isagoona sheegay in uu la soo tacaalay xanuun aad u farabadan laakiin aakhirkii ay ka yaraatay, gacantiisa ayaana isku bedashay laf aan wax tar laheyn iyadoona farihiisa ay ku qalaleen calaacasha gacantiisa.
1970-kii ayuu ninkaan ka tagay shaqadiisa, xaaskiisa iyo saddex carruur ah oo uu dhalay si uu ugu go’o cibaadada Hindus-ka, saddex sano kadib wuxuu dareemay in uusan weli iska jarin raaxada nolosha wuxuuna go’aansaday in uu gacantiisa sare u qaado si uu isaga jaro raaxada nolosha, sida laga soo xigtay The Mary Sue.
Nin gacantiisa kor u hayay in kabadan 45 sano